Maxay bisaduhu u cuni karin shukulaatada? Bisadaha Noti
Laura Torres sawir qaade | | Cuntada
Bisaduhu waa kuwo aad u xiiso badan, sidaa darteed waa inaad u fiirsataa waxa ay afkooda gelinayaan wax badan. Waxaa jira dhowr cunto oo sun u ah iyaga, sidaa darteed waa muhiim inaan siino waxa ay cuni karaan oo keliyahaddii kale waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin aad u daran.
Mid ka mid ah shakiga ugu badan ee badanaa aan qabno marka aan la noolaano mid dhogor leh waa midka muxuu bisaduhu u cuni waayey shukulaatada. Hadaad rabto inaad ogaato, sii wad aqriska maxaa yeelay maanta waxaan kashifaynaa sirta.
1 Waa maxay theobromide maxeyse bisadeeydu u cuni la’dahay shukulaatada?
2 Sideen ku ogaadaa in bisadayda ay ku sumowday cunista shukulaatada?
2.1 Maxaan sameeyaa haddii bisadaydu cuntay shukulaatada?
2.2 Maxaa lagu daweeyaa sumowga shukulaatada?
Waa maxay theobromide maxeyse bisadeeydu u cuni la’dahay shukulaatada?
Shukulaatada ayaa waxyeello u leh bisadaha iyo eyda.
Shukulaatada waxaa ku jira kafeyn, theobromine iyo waxa ku jira dufan badan. Noocyada ugu sunta badan ee bisadaha ayaa ah budada kookaha iyo baararka shukulaatada ee lagu karsado.
Theobromine iyo caffeine waxay ka tirsan yihiin kooxda kiimikada ee alkaloids methylxanthines.
La theobromine waa sunta ugu weyn ee shukulaatada iyo sababta ugu weyn ee sumeynta iyadoo la cuno shukulaatada bisadaha iyo eeyaha.
Bisaddaadu ma cuni karto shukulaatada cabirkeeda oo yar awgeed beerkiisuna waa tan hilibka adag. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga inay ka maqan yihiin enzymes gaar ah oo caawiya dheef-shiid kiimikaadka qaarkood, oo ay ku jiraan theobromine. Marka haddii xaddiga la liqay uu aad u sarreeyay, isku-dhafkan ayaa ku urursan doona dhiigga bisadda. Intaa waxaa dheer, maadada dufanka badan ayaa sababi karta beeryarada.
Sababahan dartood, Haddii bisaddaadu sakhraansan tahay, wajiga raysashadu wuu ka gaabin doonaa kan eyga.
Shukulaatada waxay khatar caafimaad oo halis ah ku haysaa bisadaha iyo eyda. Ku Sunta tani waxay ku xirnaan doontaa xaddiga, taas oo ah, saamiga shukulaatada ay cunayso iyo culeyska bisaddaada, marka lagu daro boqolkiiba nadiifnimada shukulaatada. Ahaanshaha shukulaatada caanaha ah waxay leedahay sun yar.
Sidaa darteed, haddii nuujiyahaagu cunay xitaa in yar oo ka mid ah cuntadan, noloshiisu waxay ku jirtaa khatar.
Sideen ku ogaadaa in bisadayda ay ku sumowday cunista shukulaatada?
Calaamadaha ayaa aad u kala duwan, kuwani waa kuwa soo socda:
Kordhinta cadaadiska dhiigga.
Hoos udhaca xad dhaafka ah
Polydipsia (waxay u baahan tahay biyo badan).
Maxaan sameeyaa haddii bisadaydu cuntay shukulaatada?
Xaaladaha aadka u daran, taasi waa, kuwa qaadashada ay aad u sarreysay, xayawaanku wuxuu ku dhiman karaa 24 saacadood oo keliya. Sidaas darteed haddii bisaddaadu cuntay shukulaato, Aad ayey muhiim u tahay inaad u kaxeyso xarunta caafimaadka xoolaha sida ugu dhaqsaha badan si looga fogaado inaad xaaladaas gaarto.
Marka hore Wac dhakhtarkaaga xoolaha una sheeg inaad aadeyso qolka gurmadka, waxaa muhiim ah inaad cadeyso inuu cunay shukulaatada.
Ha isku dayin inaad isaga ku matagtid guriga, maxaa yeelay bisadaha waa wax aad u adag oo waxaan sababi karnaa waxyeelo intaa ka badan.
Haddaan haysanno kaarboon firfircoon guriga waxaan ku siin karnaa bisadeena 5 kaniini. Kaarboon firfircoon ayaa mas'uul ka ah dib-u-soo-celinta dib-u-habeynta daawada theobromine iyo caffeine, iyadoo ka hortageysa nuugistooda inay dhammaystirmaan.
Haddii aadan dhuxul ku kicin guriga, way fiicnaan kartaa inaad siiso biyo ama cunto si loo yareeyo dhuuqmada caloosha oo sidaasna loo yareeyo astaamaha.
Haddii aad u maleyneyso in bisadaadu awoodday inay cunta shukulaatada laakiin aadan hubin, waxaan kugula talinayaa inaad u fiirsato 24-ka saacadood ee soo socda si aad u ogaatid wax astaamo ah sida ugu dhakhsaha badan.
Maxaa lagu daweeyaa sumowga shukulaatada?
Daaweynta uu dhakhtarka xoolaha u arko inuu ku habboon yahay waxay ku xirnaan doontaa gobolka bisadu ka soo gaarto xarunta caafimaadka xoolaha iyo astaamaha ay leedahay markii ay timaado rugta caafimaadka xoolaha.
Haddii ay hubaal tahay in waxa aad cuntay ay yihiin shukulaato, waxa ugu horreeya ee ay ku qaban doonaan xarunta caafimaadka xoolaha waa inay kiciyaan matag iyo inay sameeyaan dheecaan caloosha ku jira. Ka dibna waxaa lagu siin doonaa dhuxul firfircoon oo lagu qasay biyo iyada oo la marinayo saliingaha.
Xaaladda hubin la'aanta, suurtagal, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa raajo iyo baaritaan dhiig.
Si looga hortago fuuqbax oo loo kiciyo soo saarida kaadida, waxaa lagu siin doonaa daaweynta dareeraha. Ugu dambeyntiina, waxaa lagu siin doonaa daawo kaa yareysa garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga. Iyo dejiyeyaal si loo xasiliyo bisadaha iyo dawooyinka lidka ku ah.
Qiyaas dheeri ah, bisaddaada waxaa laga yaabaa inay heyso kateetar la dhigo si looga hortago in kafeynka dib loogu celiyo kaadiheysta.
Sidoo kale, haddii ay dhacdo in bisaddaadu u baahan tahay in cisbitaal la dhigo maalmo dheeraad ah oo ay qabto ganaca, tuubo jejunostomy ah ayaa xitaa la dhigi karaa. Baadhitaankan waxaa lagu ogaaday in ganaca uusan shaqeynin inta lagu jiro mudada soo kabashada. Si kastaba ha noqotee, waa hanaan hawl badan oo lagu soo maro qalliinka iyo suuxdinta.
Gabagabadii, nacnacyada iyo shukulaatada ku hayso gasacadaha si adag loo xiray oo ka fogow bisaddaada, maaddaama waxyeello yar oo isaga ka mid ahi ay ku dambayn karto tagista xoolaha iyo masiibada.
Had iyo jeer waa inaan eegnaa si aan u siino saaxiibkeen dhogorta leh kan ugu fiican, laakiin waxaa jira dhowr cunnooyin oo ay tahay inaan ka tirtirno liiska. Badanaa waa inaad wax siisaa Waxaan u maleynayaa iyo cunnooyinka qoyan ee gaar u ah dhirta. PLaakiin haddii aad rabto inaad siiso cunno dabiici ah, marka lagu daro shukulaatada waxaa jira cunooyin kale oo aadan adigu siin karin sidoo kale, sida: lafaha, basasha, tuunada qasacadaysan (illaa bisadaha loo tilmaamo mooyee), toon.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qoraalkan oo aad ka heshay waxtar. Waadna ogtahay, si aan kuu abaalmariyo, waxaan kugula talinayaa inaad iibsato daaweyn gaar ah oo loogu talagalay bisadaha. Sidan oo kale, caafimaadka saaxiibkeen wax khatar ah kuma jiri doono, adiguna waad deganaan doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Maxay Bisaduhu Cun karin Shukulaatada?